Saturday November 28, 2020 - 08:14:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Eereteriya ayaa sheegaya in xalay fiidkii sawaariikh casri ah lagu beegsaday bartilmaameedyo kuyaal magaalooyin ay kamid tahay caasimadda Asmara.
diblumaasiyiin reer galbeed ah oo ku sugan Eereteriya ayaa sheegaya in qaraxyo xooggan oo ka dhashay sawaariikh lasoo riday laga maqlay magaalooyinka Asmara iyo Daqamxari balse lama oga khasaaraha ka dhashay.
Sawaariikhdan oo ah kuwa ridada fog ayaa larumeysanyahay in jabhadda TPLF ay kasoo ridday deegaannada ku dhow xuduudda ay labada dal wadaagaan halkaas oo ay ka socdaan dagaallo aad uculus.
Dhinaca kale iska hor'imaadyo aad uculus ayaa lagasoo sheegayaa galbeedka iyo waqooyiga gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga itoobiya, Jabhadda Tigreega waxay sheegtay in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen dhowr degmo oo katirsan gobolka Raayah ayna cagta mariyeen gaasas katirsanaa ciidamada dowladda xabashida Itoobiya.
Hoggaanka TPLF ayaa beeniyay sheegashooyin isdabajoog ah oo ka imaanayay xukuumadda Abiy Axmed oo aheyd in ciidamadoodu ay hareereeyeen magaalada Maqalla ee caasimadda u ah ismaamul goboleedka Tigeerga.
R/wasaaraha Itoobiya oo shalay magaalada Addis Ababa ku qaabilay wafdi ka socday Ururka Midowga Afrika ayaa ku goodiyay in ay so afjarayaan howlgalka loogu magacdaray fulinta qaanuunka Gobolka Tigray islamarkaana lasoo qabqaban doono hoggaamiyaasha TPLF.
Isagoo umuuqday in uu wali madax adaygayo ayuu waxa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay in aysan wax faragelin ah kusoo sameyn dalkiisa islamarkaana dowladda Itoobiya ay awooddo soo afjaridda wax uugu yeeray caasi garoowga waqooyiga.
Xukuumadda Addis Ababa oo iska dhaadhicisay in waqti kooban ay kusoo afjari karto dagaalka gobolka Tigray ayuu waqtigu kusii dheeraanayaa walina waxaa si carcar leh udagaallamaya maleeshiyaadka TPLF.
Jabhadda Xoreynta shacabka Tigray waxay ku dhawaaqday in ay iska caabisay weerarro kaga yimid ciidamada Itoobiya iyo Ereteriya oo dhinacyo badan ka dhacay, waxayna ugu baaqday shacabka gobolka in ay hubka qaataan si ay isku difaacaan.
Hoggaamiyaal ka hadlay warbaahinta waxay sheegeen in dadka Tigreega ay geeri ka doorteen in ay isku dhiibaan amxaarada iyo Abiy Axmed.
Saraakiil melleteri ayaa sheegay in maleeshiyaadka Tigreega ay dhufeysyo ka qodanayaan daafaha magaalada caasimadda ah ee Maqalla waxayna ballan qaadeen in ay dagaalka sii wadayaan illaa ay ka dhimanayaan ama ay guul kasoo hoynayaan . Mid kamid ah hogaamiyayaasheeda ayaa beeniyay in caasimadooda lagu hareeraysanyahay.
Afhayeenka Jabhadda TPLF Getachew Rida ayaa ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay burburiyeen guuto katisan ciidamada xabashida ayna gacanta ku dhigeen saanado hub ah oo muhiim u ahaa melleteriga Itoobiya wuxuu ku goodiyay in ay cagta marin doonaan ciidamada kale haddii ay sii wadaan hujuunka ka dhanka ah Tigreega.
Khubarada melleteriga waxay sheegayaan in ciidamada Tigreegu ay haysteen agab milatari oo aad u tiro badan ayna gaarayeen 250,000 oo xubnood waxayna intaas ku dareen in gobolku leeyahay taariikh dheer oo iska caabin hubaysan, qowmiyadda Tigreega ayaa dagaallo adag lasoo gashay boqortooyooyinkii Itoobiya soo maamulayay boqolkii sano ee lasoo dhaafay dhammaantoodna waxaa hoggaaminaysay qowmiyadda amxaarada.
Dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa isku rogay mid qowmiyadeed, amxaarada iyo Tigreega ayaa is ugaarsanaya, ciidamada Itoobiya ee ka qeyb qaadanaya howlgalka waxay kasoo jeedaan amxaarada waxaana la sheegay in ay aragti ku dilayaan qofkii Tigree ah oo ay arkaan